एक्लो छोराको २४ वर्षको अल्पायुमै निधन भएपछि – Khabar Silo
एक्लो छोराको २४ वर्षको अल्पायुमै निधन भएपछि
काठमाडौँ– मोरङको केराबारीका उक परिारले आफ्नाी बुहारकिो धुमधामसँग बिहे गरिदिएका छन् । आफ्नो छोराको निधन भएपछि एकल जीवन बिताउदै आएकी बुहारीको बिहे गरिदिएका हुन् । कुवेरप्रसाद पोख्रेलका परिवारले छोरो गुमाएपछि एकल बनेकी बुहारी सुनिता पोख्रेलको आफ्नै घरबाट विवाह गरिदिएर समाजकै नमुना बनेका हुन् ।
२४ वर्षको अल्पायुमै कुवेरप्रसादको एक्लो छोरो पुण्यप्रसाद पोख्रलको निधन भएपछि एकल भएकी सुनिताको परिवारले आफन्त र गाउँका अन्य व्यक्तिको उपस्थितिमा झापा घैलाडुब्बा निवासी बलबहादुर कार्कीसँग बिहिबार विवाह गरिदिएका हुन । १३ वर्षीया छोरी सहित विराटनगरमा बस्दै आएकी सुनिताको आफ्नो रितीरिवाज अनुसार पुन विवाह गरेकी हुन् । विवाहमा जनप्रतिनिधी तथा स्थानीय नेताहरुकोसमेत सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : गौतम अडानी कसरी भारतको दोस्रो धनी भए
५७ बर्षीय गौतम अदानी भारतीय नागरिक हुन् । उनलाई पोर्ट टाईकून पनि भनिन्छ । उनको स्थाई बसोबास भारतको अहमदाबाद शहरमा रहेको छ । उनको मुख्य आयश्रोत विभिन्न प्रकारका कच्चा पद्दार्थ र वस्तुहरू हुन् । साथै पूर्वाधारको निर्माणमा उनको रुचि रहेको छ ।
अदानी आफै मेहेनतले स्थापित भएका हुन् । २०१९ मा फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्व र भारतको धनी व्यक्तीको सूचीमा उनी ४५३ नम्बरमा आएका उनी भारतको दोस्रो धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका छन् । अदानी कलेज ड्रपआउट हुन् । उनले १९८८ मा कमोडिटी एक्सपोर्ट फर्म स्थापना गर्न आफ्ना बुवाको कपडा पसललाई टेवा दिएका थिए । उनको सम्पत्ति पौने १६ अर्ब डलर रहेको फोर्ब्सले सार्बजनिक गरेको छ । पोर्ट टाइकुन गौतम अदानीले भारतको सबैभन्दा ठूलो मुन्द्रा पोर्टलाई उनको आफ्नै राज्य गुजरातमा नियन्त्रण गरेका छन् ।
अडानी समूहको रुचि विद्युत उत्पादन र प्रसारण, खाद्य तेल, घर जग्गा र रक्षामा समावेश रहेको छ । यस समूहमा करिब १३ अरब डलर (राजस्व) रहेको छ । उनि अचानक यस बर्ष भारतीय धनि मध्ये दुई नम्बरमा पर्नुको कारण उनको एक पोर्ट अस्ट्रेलियामा हुनु हो । अष्ट्रेलियामा उसको सबै भन्दा ठूलो सम्पत्ति एबट प्वाइन्ट पोर्ट र कार्मिकल कोइला खानी पर्छ । यस कारण पनि अदानी भारतीय दोस्रो धनीको सूचीमा आएका हुन् । ९ बर्षको प्रतिक्षा पछि उनले अस्ट्रेलियाको कोइला खानीमा काम सुरु गर्ने जून २०१९ मा अनुमति प्राप्त गरेका थिए । अदानीले भर्खरै दुई नयाँ उद्यमहरूमा विस्तार गरेका छन् । जसमा एयरपोर्ट र डाटा केन्द्रहरू रहेका छन् ।
उपत्यकामा १० पार्क बन्ने
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा वातावरणीयमैत्री पार्क बन्ने भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका विभिन्न १० स्थानमा यस्ता पार्क बनाउन लागेको हो। बढ्दो जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न वातावरणीयमैत्री पार्क निर्माण गर्न लागिएको प्रधिकारणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए। टोखा नगरपालिकाका तीन स्थान चण्डेश्वरी, भूतखेल र सपनतीर्थमा पार्क बनाइनेछ। काठमाडौं महानगरपालिकाको भत्केकोपुल र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पार्क निर्माण […]
हामीसँग प्रमाण छ, एनआरएनएको निर्वाचनमा धाँदली भएकै होः कुल आचार्य
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) का अध्यक्षका प्रत्यासी तथा तत्कालिन उपाध्यक्ष कुल आचार्यले निर्वाचनमा धाँदली भएको दाबी गरेका छन्। डिसी नेपाल डटकमसँगको कुराकानीमा आचार्यले एनआरएनएको निर्वाचनमा धाँदली भएको आफूसँग स्पष्ट प्रमाण रहेको बताएका हुन्। निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पोल्टामा नआएपछि फर्जी मतदाता तयार गरेर विपक्षीले मतदान गराएको भन्ने आरोप लगाउनु भयो […]
अमेरिकन आइडलको फाइनल आइतबार : दिवेश बन्लान् नयाँ आइडल ?
Posted on May 17, 2020 Author khabar silo
आइतबार राति हुने अमेरिकन आइडलको फाइनललाई लिएर ‘आर्थर गन’ उर्फ दिवेश पोखरेल केही नभर्स छन् । सायद, तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ होला । सिजनको अन्त्यतिर क्वारेन्टाइनबाटै प्रतिस्पर्धीहरुले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका छन् । अनि, अमेरिकीन आइडलका अन्तिम ७ प्रतिस्पर्धीमध्ये एक आर्थर गनले उपाधि जित्नसक्ने अड्कल धेरै अनलाइन सर्वेक्षणहरुले गरिरहेका छन् । अमेरिकी समयअनुसार साँझ ७ बजे एबिसी, […]
बिवाहपछि किन महिलाको हिप बढ्छ ? यस्तो रोचक छ कारण !